Ukuphupha ngezidalwa zentsomi Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Izidalwa eziyintsomi azikho kwi el mundo ngokwenene. Aziveli kwindalo, kodwa kwindalo nomoya wabantu. Izilwanyana zasentsomini zihlala zizinto ezinamandla angaphezu kwendalo kwaye zinamandla, ezenziwa ngeendlela ezahlukeneyo zezilwanyana. Kukho imizekelo emininzi yamanani alolo hlobo kwiintsomi ezithile. Cinga, umzekelo, nge-sphinxes, centaurs, okanye oothixo abaziintloko. Izinto ezahlukeneyo zinokufumaneka kwiinoveli zikaHarry Potter. Izidalwa zentsomi zinokuvela kwi totem.
Zonke ezi zinto zihlala zijikelezwe yinto engaqondakaliyo okanye embi. Oku kukwenza ukutolikwa kwakho kutolike amaphupha kube mnandi kwaye kube nzima ngaxeshanye. Ngesi sizathu, kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe ezinye iisimboli zamaphupha, ngakumbi xa kufikwa kwizidalwa eziyintsomi ezenziwe ngezinto ezahlukeneyo eziphilayo.
1 Uphawu lwephupha «izidalwa zasentsomini» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «izidalwa zasentsomini» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «izidalwa zasentsomini» - ukutolikwa kokomoya
Uphawu lwephupha «izidalwa zasentsomini» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokubanzi kuthathelwa ingqalelo, izidalwa zasentsomini emaphupheni ikakhulu zibhekisa kwezikhulu. umxholo wengqondoezikude kakhulu kukuqonda kobuthongo. Lo mxholo mkhulu ngoku uzama ukufikelela kwinqanaba lokuqonda ngokulala. Kodwa kuba zibonakala zingenakuqondakala, banokuqatshelwa kuphela nge-monstrosity okanye ngefantasy figure.
Ukuba isidalwa sentsomi sibonakala ephupheni njenge-monster, umphuphi kufuneka aqonde ukuba ukwimeko eyingozi okanye eyingozi ngalo mzuzu. imeko enzima ifunyenwe. Kubalulekile ukujongana noku kwinqanaba lokuqonda. Kungenxa yokuba ukuba ubungozi buqatshelwe ngexesha, kusenokwenzeka ukuba izinto ezingalunganga zinokumiswa.
Ukuleqwa sisilwanyana sasentsomini ngelixa ulele kuzisa amaxhala kunye nexesha elingonwabisiyo. Kodwa ukuba iphupha eloyisa isidalwa esiyintsomi ephupheni lalo, liya kuqhubeka ngempumelelo ngokuchasene neentshaba zalo kwihlabathi elivukayo. Oku kuya kukunika igama elihle kunye nesikhundla esibalulekileyo.
Umbono werhamncwa laselwandle ephupheni, elisemanzini, litolika ukutolikwa ngokubanzi kwephupha njengophawu olubi ngekamva. Nangona kunjalo, ukuba ubona i-mermaid emanzini xa ulele, unokuvuka Suerte kwaye sijonge phambili kuphuhliso oluqinisekileyo.
Uphawu lwephupha «izidalwa zasentsomini» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwenkcazo yengqondo yephupha, izidalwa eziyintsomi ezomzimba ephupheni. Oonozakuzakuezivela kwezona ndawo zinzulu zomphefumlo. Oku kubonakala kumntu ophuphayo ubukhulu becala njengobungangamsha okanye obungenakuqondakala, yiyo loo nto beboniswa kumfanekiso wasentsomini ngelixa belele. Ukucacisa le miyalezo, kufuneka ujonge ubudlelwane bephupha ngokwakho. Ukulahlwa okanye ukwamkelwa kunokufundwa ekuziphatheni ngokubhekisele kwisilwanyana esiyintsomi.
Ngephupha lesidalwa esiyintsomi, umntu oleleyo unokunika ingcebiso malunga nokuqinisekileyo iipropati Yamkela. Ke ngoko, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ngononophelo ukuba sisiphi isilwanyana esivela ephupheni okanye zeziphi izinto eziphilayo ezahlukileyo ezenziwayo. Imizekelo yale nto ingaba yi-unicorn, i-griffin, okanye i-centaur.
Uphawu lwephupha «izidalwa zasentsomini» - ukutolikwa kokomoya
Inqanaba elidlulayo lohlalutyo lwamaphupha libona kwisimboli yephupha "izidalwa zasentsomini" ukubonakaliswa kwemikhosi yendalo, ethathwa njengeyoyikekayo nenenkohlakalo. Ngapha koko, umntu oleleyo kuthiwa uyedwa ngephupha lesidalwa esiyintsomi. amandla ezilwanyana kwaye iipropathi zichaziwe. Kuya kufuneka icacise ukuba ungawalawula la mandla kwihlabathi lokuvuka ngokufanelekileyo.